भानु ! अझै कति रूने महिला ? – Chitwan Post
भानु ! अझै कति रूने महिला ?
“हामी बुहारीले मनमा लागेको बोल्न के पाइन्थ्यो र, जस्तो भए पनि सहेर बस्न पथ्र्यो । बारीमा साथीसँगीसँग मेलापात गर्न जाँदा कुरैकुरामा हाँस्न पनि हुन्थेन । घरकाले थाहा पाए बिजोकै हुन्थ्यो । छोरीबुहारी हाँस्न हुँदैैन, बोल्न हुँदैन । आइमाई हाँस्यो कि नास्यो, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो मेरो ससुराबा ।”
यो पूर्वी चितवन ज्यामिरेकी ५७ वर्षीया सत्यमाया पौडेलको भनाइ हो । बितिसकेका उनका ससुरा रत्नाखर उपाध्यायको यो अर्ती त उनलाई व्यर्थ लागेको छ अहिले । केही समयअगाडि योगका कार्यक्रममा सहभागी भएपछि भने उनलाई ससुराबाको भनाइ बेकार लागेको हो । सो कार्यक्रममा उनीसँगै सबैलाई योगीले हाँस्ने अभ्यास गराएका थिए । सो योग कार्यक्रममा नै हाँस्नु पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदा रहेछ भन्ने कुरा उनले थाहा पाइन् । त्यसपछि उनले भनिन्– ‘हामी महिलालाई रोगी बनाउन पो नहाँस् भनेका रहेछन्, कस्ता बेइमानी ! मैले त कुरो नबुझेर बुहारीलाई पनि आइमाई भएर धेरै हाँस्न हुँदैन भन्दै कति पटक गाली गरेँ । के थाहा ससुराबाले किताब पढ्दै पिँढीमा वेश्याले मात्र हाँस्छन् भन्ने सुनाउनुहुन्थ्यो ।’ आजभन्दा २ सय वर्षअघि आदिकवि भानुभक्त जन्मिएका थिए ।
हाँस्नु छैन कदापि नारीहरुले
वेश्या हुने हाँस्दछन्
वेश्या नहुन तथापि घरको
काम ती सबै नास्दछन्
प्रस्तुत कविताका हरफहरु आदिकवि भानुभक्त आचार्यका हुन् । आदिकविले आफ्नो कृति ‘वधूशिक्षा’मा यी हरफलाई संग्रह गरेका हुन् । भानुभक्तका सिर्जनाले आज त मुलुकमा यस्तो प्रभाव पारेको छ, आजभन्दा २ सय वर्षअगाडिको अवस्था कस्तो थियो, सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । उनले रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपाली भाषाको महिमा बढाए । उनले नेपाली साहित्य जगत्लाई ठूलो गुन लगाए ।
तर, नेपाली महिलावर्ग समुदायप्रति उनको कवित्वले न्याय गरेन । उनको कविताले पनि महिलालाई दास संज्ञा दिएको छ । महिलाको दोस्रो रुप बुहारीप्रति उनको हेराइ अन्यायपूर्ण छ । भानुभक्तले ‘वधूशिक्षा’मा श्रीमान्, सासू, ससुराप्रति बुहारीले गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा नीति नै बनाएका छन् । उनले वधूलाई पढ्ने अधिकारको कुरा गर्नका सट्टा दायित्वका बारेका कुरा गरेका छन् ।
वास्तवमा आदिकविमा पनि पितृसत्ता हावी भएको देखिन्छ । उनले पनि आममहिलावर्गको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात् गरेनन् । आममहिलावर्गप्रति उनीभित्रको कवि आँखाले पनि न्याय गर्न सकेन ।
हाँस्नु भनेको खुशी, आनन्द र रमाउनुको प्रतीक हो । अझै धेरै भानुभक्तको ‘वधूशिक्षा’का आधारमा श्रीमतीलाई सधैँ रूवाइरहने छन् । भानुभक्तका यी श्लोक भन्दै महिलावर्गकै उपेक्षा गर्ने आज पनि छन् ।
आदिकविको सम्झना गर्नुपर्छ, तथापि उनका यस्ता कृतिहरुका बारेमा पनि व्यापक छलफल हुन जरूरी छ । उनको कृतिले समाजमा के–कस्तो असर पारेको छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नैपर्छ ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ, तथापि घरको छोरी हँसिलो, आनन्दित रहनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि हाम्रोमा पाइन्छ । तर पनि खै, किन हाँस्न नहुने भने भानुभक्तले ?
प्रसंग भानुभक्तको जुट्यो, तर अन्य धेरै कृतिहरु महिलामैत्री छैनन् । लैंगिक हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै असमानता पाइन्छ । महिलाले गायत्री जप्न हुँदैन । गायत्री आफैँ महिला हुन् त महिलाले जपेको उनले कसरी मन पराउन्नन् र ? छोरीबुहारीले वेद पढ्नै त के छुन पनि हुँदैन भन्ने छ । आज पनि महिलालाई गुरूकुलमा वेद अध्ययन गर्ने अवसर छैन । कृतिका रचनाकारलाई महिलाले जन्माउन हुने, तर महिलाले पढ्न नहुने ?
भानुभक्तभन्दा केहीपछि जन्मिएकी कवि योगमाया आज पनि गुमनाम छिन् । उनको सामाजिक आन्दोलनको पाटो पर सारेर साहित्यिक पाटो मात्र निहाल्ने हो भने उनको कवित्व विशिष्ट देखिन्छ ।
हाम्रो सर्वोच्च हिमालले
अरूण बरूणको शान
त्यहीँबाट आउँछ ।
बाह्मण भई सबै
चीजको बिक्री गरेको
दुःखीहरुको वृत्ति हरेको
यस्ता सामाजिक वस्तुस्थितिका बारेमा कविता कोर्ने योगमाया हुन् । के महिला भएकैले पछाडि परेकी हुन् ? उनी निरक्षर थिइन्, तर पनि धाराप्रवाह उनले कविता भन्न सक्थिन् । उनले तत्कालीन राणा सरकारको दमन, शोषण, भ्रष्टाचार, अन्यायका विरूद्ध जनतालाई जगाउने कविता कोरेकी थिइन् ।
निरंकुश राणा सरकारले समाज रुपान्तरणमा चासो नदिएको, जनताको हत्या गरेको भन्दै यदि जनताले न्याय नपाए ज्यान दिन पछि नपर्ने चेतावनी उनले दिएकी थिइन् । सरकारले १ सय ६८ बुँदे मागको कुनै सुनुवाइ नगरेपछि समर्थकका साथ सरकारको विरोधस्वरुप जीवन आहूति दिएकी थिइन्, उनले । यस्ती स्रष्टालाई कसैले आज किन सम्झिएन ?
वि.सं. १९९८ असार २२ गते उनले सरकारको विरूद्धमा जीवन बलिदान गरेकी थिइन् । उनी त विश्व इतिहासकै अमर स्रष्टा हुनुपर्ने हो, तर नेपाली मात्रले र नेपाल सरकारले मात्र उनको योगदानको कदर गरेका छैनन् । आज योगमायाको सम्झनामा भन्नेहरु भेटिएका छैनन् । उनीजस्तो प्रजातन्त्रका लागि, समाज रुपान्तरणका लागि लड्ने योद्धा सायदै कोही छन् !
स्रष्टा कुनै जाति, वर्ग, समुदाय कसैका हुँदैनन् । तर, उनको सम्झना मात्र पनि हुन सकेको छैन । विश्व इतिहासका महिलाले भन्दा नेपाल भूमिका महिलाको योगदान कम
छैन । वैदिक कालीन महिलाहरु गार्गी, मैत्रेयीजस्ता बह्मवादिनीहरुको कुरा गर्न पर्दैन । जबसम्म यी महिलावर्गले आफ्ना अग्रज महिलाहरुको योगदानको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्देनन्, त्यसको असर घुमेर आउँछ नै ।
महिला हिसां न्यूनीकरणका लागि दशकभन्दा बढी भइसक्यो आवाज उठाएको, तर परिणाम उल्लेखनीय आउन सकेको छैन । चितवन माडीमै आफ्नै प्रेमीको हातबाट हत्या भयो । यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । आज पनि श्रीमान्को, प्रेमीको, बाबुलगायतका आफ्नैको हातबाट समेत महिलाको जीवन गएको छ ।
जबसम्म समाजमा कविता परम्पराको नाममा, शास्त्रको नाममा रहेका यस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गर्न लागिँदैन, तबसम्म प्रतिफल आकाशको फलसमान हुन्छ । समाजमा आज पनि छोरीबुहारी चुलोचौकोकै भुमिकामा बाँधिएको अवस्था छ । विश्वका महिला क्लारा जेट्किन, बेनजीर भुट्टोले यसो गरे भन्नुभन्दा पनि हाम्रो योगमाया, दिव्या, शैलजाले यसो गरेका थिए भनेर भन्न सक्यौँ भने त्यो समाज रुपान्तरणको खुट्किलो बन्न सक्छ ।
नेपाली महिलाले आज पनि धर्म, संस्कृति, परम्पराका नाममा पुरूषवाद सहन बाध्य छन् । यी सबै विभेदी परम्पराका रचनाकार पितृसत्ता हो । यसको अन्त्यका लागि महिला–पुरूष सबैको भूमिका आवश्यक छ ।
स्रष्टा र सपूतहरु कसैका हुँदैनन्, उनीहरु राष्ट्रका गरिमा हुन् । उनीहरुलाई भेदभाव नगरीकन उनीहरुको योगदानलाई सम्मान गरिनुपर्छ । यो नै समाजको सदियौँदेखिको कुसंस्कार र कुरीतिको जालो तोड्ने हतियार हो । गणतन्त्रमा त झन् यस्तै छायामा पाारिएका सपूतहरुको योगदानको कदर हुनैपर्छ । जीवन, हाँसो, खुशी सबैको अधिकारको पाटोतर्फ प्रत्येकको ध्यान पुगोस् ।